विवाह बन्धनमा बाधिएकी अभिनेत्री श्वेता खड्काको यस्तो भावुक लेख.. – Ap Nepal
विवाह बन्धनमा बाधिएकी अभिनेत्री श्वेता खड्काको यस्तो भावुक लेख..
अभिनेत्री श्वेता खड्का सोमबार विवाह गरिन । विवाह बन्धनमा बाँधिएपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा भावुक हुँदै स्टाटस लेखेकी छन् ।
धनगढीका विजयेन्द्रसिंह रावतसँग उनले हिजो लगनगाँठोमा कसेकी हुन् । उनीहरुको विवाहको कार्यक्रम काठमाडौँको गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा आयोजना गरिएको थियो ।
कोरोनाको कहरका कारण उनीहरुको विवाहमा सीमित व्यक्तिको मात्र उपस्थिति रहेको थियो ।
अभिनेत्री श्वेता खड्काले यस्तो लेखिन
”अनत्वगोत्वाः मैले सिउँदोमा सिन्दुर भरें , हातमा सप्तरङ्गी चुरा लगाएँ अनी रङ्गिन पहिरन भित्र आफुलाई सजाएँ । मैले जिन्दगीको अर्को एउटा यात्रामा पाइला चालें ।
मेरो यो यात्रामा मेरा सम्पुर्ण इष्टमित्र , आफन्तजन , गन्यमान्य ब्यक्तित्व , शुभचिन्तक लगाएत मलाई सँधै साथ र समर्थन गर्ने मेरा संचारकर्मी मित्रहरुको सुवेक्षा र आशिर्वादको खाँचो छ । मैले सुरु गरेको जिन्दगीको यो अर्को अध्यायमा अझै धेरै गर्न बाँकी छ । मैले नेपाली सिने जगतलाई मेरो शिरको सिन्दुर जस्तै अझै उच्च स्थानमा पुर्‍याउनु छ ।
निर्माणाधिन माझिटोललाई आज सँजिएको बिहेको मण्डप भन्दा पनि अझै सजाउनु छ । मैले थालेका ब्यावसायहरुलाई मेरो हातमा चम्किएका चुराहरु जस्तै चम्काउनु छ । मैले अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । थाती रहेका मेरा कार्यहरुमा थप उत्साह र उमंग बोकेर लागी पर्नेछु । म थप शसक्त नारीको रुपमा तपाईहरुको सामुन्ने प्रस्तुत हुनेछु ।
आगामी दिनमा एकल महिलाको शसक्तिकरणमा केही गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सोच छ । त्यस्लाई साकार बनाउनको लागी म प्र यासरत रहनेछु । अतः मलाई तपाइहरु सम्पूर्णको साथ , साल्लाह , सुझावका साथै शुभ आशिर्वादको आवस्यक्ता छ ।
हिजोका दिनमा भन्दा पनि आगामी दिनमा मैले सबैबाट अझ धेरै माया, सदभाव र साथ पाउने आशा बोकेकी छु।”
Posted in ब्यानर पोस्ट
Prev१२ लाख लिएर श्रीमती फरार, कल डिटेल्समा यस्तोसम्म भेटि’यो (भिडि’यो सहित)
Nextआज एकैदिन ह्वात्तै बढ्यो सुनको मुल्य, कति पुग्यो तोलाको ? हेर्नुहोस्
इन्द्रेणी कृष्ण कंडेलको छोरी पहिलो म्युजिक भिडियोमा- हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
असिना पानी सहित हावाहुरीको कारण खेतीबालीमा क्षति
इलेक्ट्रिक साइकल- अमेरिकामा साइकललाई कति पर्छ होला ? नेपालीले घुमाए यस्तो मार्केट (भिडियो)
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (119698)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (72795)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38797)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (33216)